Embassy of the Republic of the Union of Myanmar , London | Daily News Brief on Rakhine State Affairs 16/03/2018
Daily News Brief on Rakhine State Affairs 16/03/2018
(နေပြည်တော်၊ ၁၆-၃-၂၀၁၈ ရက်)
No one should be allowed to politicize the repatriation process
Opinion, The Global New Light of Myanmar
Naypyitaw, March 16
We have recently receivedalist of 8,032 people from Bangladesh during the Myanmar-Bangladesh Home Ministers' Meeting held in Dhaka on 16 February.
We would like to remind the international media that our country was in successful democratic transition because of the help of the international media. That's why in the future, we would like to request the international media to support our democratisation process and the development of our country.
ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးလုပ်ငန်းစဉ်နှင့်ပတ်သက်၍ မည်သူတစ်ဦးတစ်ယောက်ကိုမျှ နိုင်ငံရေးအမြတ်ထုတ်ခွင့် မပြုသင့်
Opinion, The Global New Light of Myanmar, မတ်လ ၁၆
မြန်မာနိုင်ငံအနေဖြင့် ရခိုင်ပြည်နယ်မှ နေရပ်စွန့်ခွာသူများအား လူ့အခွင့်အရေး ကာကွယ်ရေး၊ သည်းခံ စိတ်ထားရှိရေးနှင့် ၎င်းတို့အတွက် လုံခြုံမှုရှိရေးတို့ကို ဦးစားပေးလုပ်ဆောင်လျက် ပြန်လည်စိစစ် စတင်လက်ခံရန် အဆင်သင့်ဖြစ်နေပြီဖြစ်ပါသည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၃၇၄ ဦးအား အတည်ပြုစစ်ဆေးပြီးဖြစ်ကြောင်းနှင့် ၎င်းတို့အား ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ အဆင်ပြေသည့်အချိန်တွင် ချက်ချင်းလွှဲပြောင်းရေး ဆောင်ရွက်နိုင်ကြောင်း အသိပေးအကြောင်းကြားထားပြီးဖြစ်သည်။
မိမိတို့အနေဖြင့် ဟိန္ဒူဘာသာဝင် ၅၀၈ ဦး၊ မူဆလင်ဘာသာဝင် ၇၅၀ ဦးတို့ပါဝင်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာသူ ၁၂၅၀ ဦး၏ အမည်စာရင်းအား နေပြည်တော်တွင် ဇန်နဝါရီလ ၁၅-၁၆ ရက်က ကျင်းပခဲ့သည့် ပထမအကြိမ် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် ပေးပို့ခဲ့ပါသည်။
ဖေဖော်ဝါရီ ၁၆ ရက်က ဒါကာမြို့တွင် ကျင်းပခဲ့သည့် မြန်မာ-ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် ပြည်ထဲရေးဝန်ကြီးများ အစည်းအဝေးတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ ပေးအပ်သည့် လူပေါင်း ၈ဝ၃၂ ဦး၏ အမည် စာရင်းကို မိမိတို့ရရှိခဲ့ပါသည်။
စိစစ်ရေးလုပ်ငန်းများကို လူဝင်မှုကြီးကြပ်ရေးမှ တာဝန်ရှိသူများက ဆောင်ရွက်လျက်ရှိပါ သည်။ သို့ရာတွင် ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်ဘက်မှ လက်ခံရရှိသော ဖြည့်စွက်ရမည့် စာရွက်(Form)များမှာ ပထမအကြိမ် ပူးတွဲလုပ်ငန်းအဖွဲ့အစည်းအဝေးတွင် နှစ်ဦးနှစ်ဖက် သဘောတူညီထားသည့် စိစစ်ရေး (Form) များ မဟုတ်သည်ကို တွေ့ရှိရသည်။
မိမိတို့ အံ့သြတုန်လှုပ်ခဲ့ရသည်မှာ မတ်လ ၇ ရက်နေ့က ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ်အဆင့်မြင့် အစိုးရအဖွဲ့ဝင် ဝန်ကြီးတစ်ဦးက ပြန်လည်ခေါ်ယူရေးနဲ့ပတ်သက်၍ မိမိတို့ ကြိုးပမ်းအားထုတ်မှုတွေကို အပျက်မြင် ရှုထောင့်က သုံးသပ်ဝေဖန်ပြီး နိ်ုင်ငံတကာ မီဒီယာတွေကို ပြောကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါသည်။
နေရပ်စွန့်ခွာထွက်ပြေးသူများသည် ကြောက်ရွံ့ခြင်းကြောင့် ပြန်လာရန် ငြင်းဆိုခြင်း မဟုတ်ဘဲ ၎င်းတို့အနေဖြင့် သွေးဆောင်ဖြားယောင်းခံရခြင်း၊ ARSA နဲ့ ၎င်းတို့အားထောက်ခံသူများ၏ ခြိမ်းခြောက်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပြီး၊ ၎င်းတို့၏ လုံခြုံရေးအား စိုးရိမ်မှုရှိနေပါသည်။ ARSA အဖွဲ့အနေဖြင့် မိမိတို့၏ ပြန်လည်လက်ခံရေးလုပ်ငန်းစဉ် စတင်ဆောင်ရွက်စဉ်ကပင် မြေမြှုပ်မိုင်းထောင်ခြင်းစသည့် ဖောက်ခွဲရေးလုပ်ငန်းများလုပ်ဆောင်၍ နှောက်ယှက်လျက်ရှိပါသည်။
UEHRD အနေဖြင့်လည်း ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့်သူများအတွက် စီးပွားရေးအခွင့်အလမ်းများ ပေါ်ထွန်းလာစေရန် ဖန်တီးပေးမည်ဖြစ်ပြီး၊ လူသားချင်းစာနာထောက်ထားသည့် အကူအညီများ ထိရောက်စွာ ပေးအပ်သွားမည်ဖြစ်ပါသည်။ ၎င်းအပြင် ပြန်လည်နေရာချထားရေး၊ စီးပွားဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးနှင့် ရေရှည်တည်တံ့ ခိုင်မြဲသော ငြိမ်းချမ်းရေးဖော်ဆောင်နိုင်ရေးတို့ကို ဆွေးနွေးညှိနှိုင်းလျက်ရှိပါသည်။
လုံခြုံရေးအပိုင်းအနေဖြင့် ပြန်လည်ဝင်ရောက်လာမည့်သူများ၏ လုံခြုံရေးအတွက် နိုင်ငံအတွင်း၌ လုံခြုံစိတ်ချရသည့် ပတ်ဝန်းကျင်ရရှိရေးအတွက် အာမခံချက်ပေးနိုင်ပါကြောင်း၊ မိမိတို့ နိုင်ငံအနေဖြင့် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများ၏ ပံ့ပိုးမှုကြောင့် ဒီမိုကရေစီအသွင်ကူးပြောင်းရာတွင် အောင်မြင်မှုရရှိခဲ့ပြီး၊ အနာဂတ်တွင် မိမိတို့၏ ဒီမိုကရေစီလမ်းကြောင်း ရှေ့ဆက်လျှောက်လှမ်းနိုင်ရန်နှင့် မိမိတို့ နိုင်ငံဖွံ့ဖြိုး တိုးတက်ရေးအတွက် နိုင်ငံတကာမီဒီယာများအနေဖြင့် ကူညီပေးနိုင်ပါရန် မေတ္တာရပ်ခံလိုပါသည်။
မီဒီယာများအနေဖြင့် သတင်းများအား မျှမျှတတအမြင်ဖြင့် ရေးသားဖော်ပြပေးစေလိုကြောင်း၊ ယင်းသည် ယခုသတင်းစာရှင်းလင်းပွဲ၏ ရည်ရွယ်ချက်နှင့် မိမိတို့၏ မျှော်လင့်ချက်များဖြစ်ပါသည်။